ekolishi IsiFulentshi MSU uvame ukubizwa ngokuthi 'eMoscow le Sorbonne. " Lokhu ukusungulwa ngempumelelo abesebenza kusukela ngo-1991, futhi ngo-isendleleni ke uhlukile ngempela. Ngalesi ekolishi cishe nanoma ubani ofuna emuva kule minyaka emithathu ayichithe cwaningo ngasiphi inyuvesi eRussia noma CIS, ungathola besigaba sesibili. Futhi okubaluleke nakakhulu, ekolishi IsiFulentshi MSU, ukubuyekezwa labafundi esizoyicabangela kulesi iphepha, inikeza lokhu kusebenza khulula.
Umlando omfishane ekolishi ukubukeka
Wokuvulwa lokhu semfundo wawuba ngasekuqaleni 1991 ngesisekelo eMoscow State University. College of isiFulentshi ngesikhathi MSU uvele kakhulu ngosizo isishoshovu French yezenhlalakahle okuthiwa uMark ngomkhala futhi sibonga isinyathelo esathathwa yikomidi abaziwa umhlaba wonke Sakharov academician. Isici esikhethekile kule ndawo wukuthi on ngesisekelo yayo ukubambisana phakathi 7 amayunivesithi ngobukhulu eFrance MSU.
Namhlanje ngo-MSU College kunikeza ithuba uthole idigri kwi-humanities izindawo ezintathu:
Kufanele kuphawulwe ukuthi ngemva kokuthweswa iziqu, umfundi ophothule izifundo uthola diploma ekhishwe French umlingani amanyuvesi. Ngenxa yalesi sizathu, i-French College eMoscow State University, I diploma noma okuyinto wahlonishwa wonke amanyuvesi isiFulentshi, zenza abafundi bayo ngemva kokuthweswa iziqu ukuqhubeka nezifundo zabo eFrance, Ufake kakade ngqo onyakeni iziqu yesibili. Futhi uma ucabangela ukuthi leli thuba kumahhala, umbuzo kanjani uthole ngempela ku ekolishi nesithakazelo entsheni eningi.
ekolishi IsiFulentshi MSU: uqhubeka kanjani ekuqeqeshweni
Njengoba eziyinqaba engavamile kubafundi bethu kungase kuzwakale, kodwa ukuze ube umfundi waleli ekolishi, sidlule izivivinyo akudingeki. Into esemqoka - ukuze ube umfundi okungenani unyaka wesi-4 eyunivesithi eMoscow noma eyunivesithi CIS futhi ube ngesitifiketi sokuqeda 3 izifundo esikoleni zabo eziphakemeyo. imfundo Kakade akuphelele ephakeme eMoscow State University College of French wamukelekile.
Ukuze fake i isicelo kumelwe nakanjani ube yisakhamuzi Russian noma ube isakhamuzi kwelinye lamazwe CIS. Upper age umkhawulo kulabo abafisa ukuba bayofunda khona, umkhawulo kuphela engu esiphezulu iminyaka engu-35 kulabo abafuna ukuthola umfundaze ukuze ngiyoqeqeshwa ngokwengeziwe kakade e-France.
Lapho ukubhalisa ubuthishela ukuthi ine, isimiso akunandaba. Okukhishwayo kuphela emkhakheni wemisebenzi yezomthetho okuyiwona udinga ukuba nemiqondo eyisisekelo emkhakheni umthetho noma emnothweni.
ekolishi IsiFulentshi MSU has amafomu amabili kwezilimi ukuqeqeshwa - lo okhuluma isiFulentshi Russian ukukhuluma futhi. Yiqiniso, ikusasa ukuqeqeshwa French unikeza abafundi amathuba amaningi, kanye nalabo abafuna ukufunda kuyo, kuhlolwe ebhaliwe olwazini ulimi.
Ukuze ucwaningo French University College of Moscow State University, kumele zidlule imicikilisho ezimbalwa ezilula:
Faka isicelo ubulungu elektroniki (kungenziwa ngokusebenzisa website esemthethweni ekolishi).
Ukuze afeze okuthunyelwe zokuphatha, okungukuthi, ukuhambisa wonke amanye amadokhumenti adingekayo (2 matte izithombe, ifothokhophi iphasipoti, ikhophi esikoleni esiphakeme idiploma noma ikhadi umfundi futhi Libhuku).
Okulandelayo ukubhalisa kumele kuhlolwe ukuthi uhlola ezingeni isiFulentshi (kubalulekile ukuba labo abavame ukuhlela ukufunda egatsheni abakhuluma isiFulentshi).
Dlula Pedagogical inqubo yokuqopha (emva ukuhlolwa isiFulentshi ilethwa, umfundi kufanele ichaze eyala zayo ezimbili eziyinhloko). Uma ukuhlolwa ayikhululwa, umfundi ukuthi ubhaliselwe wezifundo isiRashiya, bese kudingeka ukuba bazikhethele isiyalo eyodwa eyinhloko. Ngokuba Amarekhodi zemfundo uzodinga ukwethula ikhadi ID umfundi esikhishwe emva irekhodi zokuphatha, bese ugcwalisa ifomu ukubhalela College. UMzila ukuqoshwa Pedagogical esiteji kudinga abafundi ukuba khona kuyo yonke izinkulumo ngezihloko akhethiwe, kanye inikeza ukufinyelela ukulethwa ukuhlolwa kanye lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela mqondo.
Ukuze uqhubeke nezifundo zabo ngonyaka ukuqeqeshwa ngesikhathi French College yesibili kuphela labo abafundi ngempumelelo abaphumelele ukuhlolwa kwabo yezihloko emva onyakeni wokuqala. Futhi zidinga imfundiso kanye namarekhodi zokuphatha ukuthi kungenziwa ngesikhathi likanobhala ngesikhathi esifanayo. Abafundi abaye eselunyuliwe ku onyakeni wokuqala uMnyango isiRashiya, ngonyaka ka Ucwaningo lwesibili abakwazi ukuya okhuluma isi-French. Kodwa ngenkathi inguquko esinjalo kungenzeka ekuqaleni konyaka wokuqala cwaningo. Uma umfundi ayikwazi ukuthatha isivivinyo French futhi ngabelwa ukufundisa ngesiRashiya, kodwa ezinyangeni zokuqala yokutadisha kubonakale some bengalwazi French, ngesiphakamiso omunye wothisha bakhe ingadlulisela eya egatsheni elikhuluma isiFulentshi.
Kulabo-ke kangizidingeli ukuthola diploma ophambili ngokuyinhloko unesithakazelo ukunwetshwa HORIZONS zabo futhi imatasa self-imfundo, College French eMoscow State University uye walungisa ithuba self-ngcono. Lesi sikole sinikeza ithuba lokuya ezifundweni ezithakazelisayo njengenhlangano umfundi zangaphandle. Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukwenza 2 amaphuzu uhlu kuphoqelekile yokwemukela ekolishi (ukuthi uthumele isicelo electronic futhi wenze irekhodi nezokuphatha).
Kulokhu, indoda ikhadi oluvelele umfundi, futhi ngalolo suku waphumula zingadlulela ensimini eMoscow State University kanye ukulalela izinkulumo ezithakazelisayo kuye. Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi isitifiketi mabhuku ezinjalo ngeke ikhishwe. Kulabo abafisa usathola diploma, kukhona 2 izinhlobo zokufunda - ngesiRashiya nesiFulentshi.
Imininingwane ye inqubo yemfundo emahhovisi abakhuluma isiFulentshi
Ngaphambi kokuqala konyaka wokuqala ezifundweni, abafundi kumele ukhethe izikhonzi zakhe ezimbili eziyinhloko sokucwaninga ekolishi. Kungenxa lezi eyala inqubo yokufunda othisha French ubambe seminar kanye izinkulumo. Futhi e-French ekolishi abasizi olwenziwa workshop masonto onke.
Ngomnyaka wokuqala isifundo ngamunye izifundo akhethiwe zidingidwa izivivinyo ezimbili ngokubhala. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kobuholi umeluleki yesayensi French ezibhaliwe imisebenzi yesayensi. Ngonyaka wokuqala ukuqeqeshwa amahora ivolumu 228, ngonyaka wesibili - amahora 114.
College yesikole ngesiRashiya
Kwenziwa ukuqeqeshwa Uhlelo ekolishi ngesiRashiya kancane kulula kuka-French. Futhi hhayi kuphela kakhulu izilimi, futhi kulolu hlelo, okuyinto lula kakhudlwana. On the Yiqiniso lokuqala uzodinga akhethe isiyalo eyodwa kuphela njengoba ezinkulu. Isihloko sesibili ikhethwa njengoba i extra. Phakathi nonyaka wokuqala, efunda nabo bayaya ezifundweni, futhi kulezo zimo lapho kukhona othisha isiFulentshi, bajabulele isevisi yokuhumusha kanyekanye.
Ngaphezu kwalokho, ngamunye kwezihloko asebenzelana luhlolo ebhaliwe eyodwa kuphela. Ngo-December - okwengeziwe, futhi ngo-May - I-main.
Esikhathini yesibili amakilasi ngonyaka aphethwe kuphela isiyalo eziyisisekelo. Abafundi ukulalela izinkulumo futhi khona workshop, okuyinto baqhuba abafundisi MSU. Ngaphansi kokuqondisa ngemisebenzi yabo ebhaliwe yesayensi, zivikelwe abafundi ekupheleni konyaka. Inombolo ukuqeqeshwa amahora ngesimo isiRashiya esingaphansi okhuluma isi-French. Ngonyaka wokuqala kuba amahora 126, futhi ngonyaka wesibili - 84 kuphela.
ekolishi IsiFulentshi MSU: negative Izibuyekezo umfundi
Kunengqondo ukuthi amathuba anikezwa ekolishi, enhle ngempela hhayi ukuzisebenzisa bekungaba ubuwula. Kodwa, naphezu kweqiniso lokuthi kule isikhungo inikeza ithuba khulula ukufunda kahle isiFulentshi, ufunde futhi wenze uxhumano nge wabafundisi ababedume French uthola idiploma ye imfundo lonke inani labafundi kufikwe onyakeni wokuqala wesibili, ngaphambi kwezidingo idiploma iza nengxenye kuphela.
Kungani kusiza ukuqonda Izibuyekezo oluthunyelwe abafundi basekolishi ezithangamini ezehlukene. Esinye sezizathu eziyinhloko letivimbela abafundi ukuthola diploma, ngezinga eliphezulu of ukusetshenziswa kanye ukushuba ukuqeqeshwa, ikakhulukazi onyakeni wokuqala. Abafundi abaningi ukuza ekolishi njengoba abafundi esigcwele eyunivesithi zako ezisemqoka futhi sihlanganise izifundo, ikakhulukazi eminyakeni yokugcina, ngokubona abafundi, kunzima kakhulu ngempela.
Inkinga yesibili abafundi abaningi ukungabi ehostela, okungukuthi, labo ukuba izinkulumo, izivivinyo kanye iziqu beze, kufanele ngifuna izindlu eMoscow wedwa, futhi kungaba izivakashi futhi eziyinkinga bese ebizayo ngokuya impahla.
Futhi ngesikhathi ekolishi, intshiseko abafundi abaningi 'sokuqala uqala zinyamalale. Futhi lokhu ixhunyiwe neqiniso lokuthi diploma ekolishi ngokuyinhloko zezenhlalakahle. Ukuze abafundi kancane kancane eza ukuqaphela ukuthi, ngokwesibonelo, i-degree ifilosofi ngeke kusize ukuthola umsebenzi oholela kahle njengoba emakethe wezazi wokusiza muva kuyachichima futhi sikhulu kakhulu isidingo ngabo, maye, akuyona lenyuke.
Abafundi abaningi tlola ngalokho udondolo ekolishi, nakuba akaphoqelekile, kodwa ngokuvamile kakhulu ukusiza abafundi ngokuvakashela ukuxazulula inkinga izindlu. Ngesikhathi ekolishi kungenzeka ukuvumelana ehostela e-Moscow State University.
Futhi abafundi ikakhulukazi ngenkuthalo nethuba uthole umfundaze ukuze iqhubekisele phambili imfundo yayo, futhi ngesikhathi senqubo ukuqeqeshwa ihlelwe uhambo ezihlukahlukene nothisha isiFulentshi (isibonelo, ziya kwelinye idolobha ngoba lwezenhlalo Research), okuyinto, ngokusho okuhlangenwe nakho okukhulu, futhi yisigungu ekolishi .
Lesi sakhiwo engcono emanyuvesi eMoscow
Amanyuvesi State Petersburg. Isilinganiselwa amanyuvesi Petersburg
Ancient Egypt: isikhali enegama
Kungani "Pokemon Hamba" kuqale? Izinkinga eyinhloko umdlalo nezindlela uzikhuza
I kuphoqelelwa sento ngolimi lwesiNgisi